Himalaya Dainik » जापानमा शरणार्थी बन्न ४६६ नेपालीको आवेदन !
जापानमा शरणार्थी बन्न ४६६ नेपालीको आवेदन !
32 seconds अगाडी
टोकियो- जापानमा शरणार्थी बन्न गत वर्ष ४६६ जना नेपालीले आवेदन दिएको खुलेको छ ।
नेपालबाट भिजिट भिसामा र स्टूडेन्ट भिसामा जापान आउनेहरुले शरणार्थीका लागि आवेदन दिने गरेका हुन्। शरणार्थीका लागि आवेदन दिने कति नेपालीको आवेदन स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा भने केही विवरण खुलेको छैन।
गत वर्ष जापानमा ३ हजार ९ सय ३६ जनाले शरणार्थीका लागि आवेदन दिएकोमा ४७ जनालाई मात्र शरणार्थीको हैसियत प्रदान गरिएको थियो।
अघिल्लो वर्ष शरणार्थी मान्यता पाएका मध्ये १९ जनाले आवासीय हैसियत पाएको निप्पोन न्यूजले उल्लेख गरेको छ। सन् २०२० मा शरणार्थी हैसियत पाएकामा कूल ४७ मध्ये ११ जना चिनियाँ रहेका छन्।
चीनले सिनचियाङ क्षेत्रका विगर मुस्लिमहरु लगायत जनजाती समूहहरुलाई गरेको व्यवहारका कारण पछिल्लो समय चीनको आलोचना चर्किएको छ। विशेष गरी अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुले चीनले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
जापानमा दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने यहाँ लगभग प्रत्येक महिना नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीको भ्रमण हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारबाट सुरु भएको क्रम पछिल्लो महिनासम्म अर्थमन्त्री र श्रममन्त्रीको भ्रमणसम्म आइपुग्दा विधिवत् रूपमा कुनै पनि भ्रमणमा यहाँको स्थानीय नेपालीको समस्याले प्रवेश पाएको थिएन।
पछिल्लो शरणार्थी आवेदनको सम्बन्धमा भने जापान स्वयंको पनि चासो रहेकाले श्रममन्त्रीको भ्रमणमा केही कामदारको विषयमा छलफल भएको छ। लामो समयदेखि नेपाल दूताबासको फोन नउठ्ने समस्याले पटक-पटक दूताबासको आलोचना हुने गरेको छ। फोन नउठ्ने समस्याबारे दूताबाससँग तर्कसंगत उत्तर पनि छ- विगतमा १० हजार नेपाली हुँदा पनि यहाँको दूताबासमा तीन कर्मचारी थिए। अहिले ४० हजार नेपाली पुग्दा र एमआरपीको चटारो हुँदा पनि कर्मचारी संख्या तीन नै छ।
अब ती तीनजनाले दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने कि मन्त्रीको भ्रमण तालिका मिलाउने? एमआरपीको चटारो सम्हाल्ने कि फोनमा नेपालीको गुनासो सुन्ने ? यी सबै कुरा सुन्दा फोन नउठ्ने समस्या तर्कसंगत लागे पनि विगत दुई वर्षदेखि समस्या समाधान नहुनु बिडम्बनापूर्ण छ। अब दैनिक काम गर्न कर्मचारी नपुग्ने बेलामा देशको पर्यटन विकासको गतिविधि, विद्यार्थीका समस्या समाधान, नेपाली कामदारका समस्या समाधानजस्ता विषयमा राजदूतावासको भूमिका अपेक्षा गर्नु भनेको दिवास्वप्न भएको छ।
जापान प्रशस्त अवसर भएको देश हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके नेपालीका लागि यो राम्रो श्रम बजारका रूपमा विकास हुन सक्छ। ‘अलि अलि काम गर्छु अनि पढ्छु’ भन्ने मध्यम वर्गीय विद्यार्थीका लागि जापानमा थुप्रै अवसर उपलब्ध हुन सक्छ। अझ यहाँको दूताबासले अन्य कतिपय देशले गरेजस्तै करको दायरामा केही सहुलियतका लागि पहल गर्ने, विभिन्न निजी सरोकार केन्द्रसित छलफल गरी छात्रवृत्तिको अवसर बढाउने काम गर्न सक्छ।
कामदारको सुविधाको बारेमा सरकारी पक्षबाट नै पहल हुनु जरुरी छ। पूर्णकालीन कामदारको बारेमा जापान सरकारले नै आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा यसभित्रको अवसरबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। जापान अध्ययन, काम र व्यवसायको निम्ति अत्यन्त धेरै अवसर भएको मुलुक हो।
क्युट श्रृष्टीको लोभ्याउने सुन्दरता, हेराैँ १० तस्बिर
कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै धेरै एकैदिन ५५ जनाको मृत्यु
शव पोष्टमार्टमका लागि ल्याउदै गरेको जीप दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु !
खुट्टामा पैसाको बिटो बाँधेर अनाैठो धन्दा !